Amacandelo asuka kwiLinux
Ukusuka kwiLinux yibhlog yakho yangoku apho uya kufumanisa yonke into enxulumene nomhlaba weLinux. Ukongeza, njengoko usenokuba ufumene igama layo, uyakufumana izifundo, iincwadana kunye neengcebiso ukuze ukwazi ukwenza nawuphi na umsebenzi ovela kwiLinux, eya kukunceda ulibale ngezinye iinkqubo zokusebenza, ngakumbi ukuba uyi "switcher".
Kungenxa yokuba uGoogle uthathe isigqibo sokuseka inkqubo yokusebenza kweLinux, le bhlog ikwanolwazi olunxulumene nelizwe le-Android. Iindaba ezipapashwe kwiLinux zikwaqokelela ulwazi olunxulumene nabantu abadumileyo kwiLinux, phakathi kwayo ekumila kuyo uLinus Torvalds, odale, ophuhlisa kwaye agcina ikernel yenkqubo nganye yeLinux.
Phakathi kwezicelo esixoxa ngazo kule bhlogi sinoyilo, inkqubo, ii -apps zemultimedia okanye, ewe, imidlalo. Unoluhlu lwamacandelo e-Linux apha ngezantsi. Eyethu Iqela labahleli inoxanduva lokugcina nokuhlaziya yonke imihla.
Inkangeleko / ubuqu
Sebenzisa iLinux yeFayileLet
Inethiwekhi / iiseva
Izifundo / iincwadi / Iingcebiso